Home AMERIKANINA STARS Ny tantaran'i Juan Cuadrado momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra iray izay fantatry ny anarany malaza; "Vespa". Ny tantaran-tantaran-tantaran'i Juan Cuadrado momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa ny zava-misy marina momba ny tantaram-piainana dia mitondra fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny zava-misy tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra momba ny fahaiza-manaony any an-tampon'ny havony fa vitsy no mihevitra fa ny Bio Juan Cuadrado dia tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy adieu, dia aoka isika hanomboka.
Juan Cuadrado Childhood Story Plus Untold -Voalohandohan'ny fiainana
Juan Guillermo Cuadrado Bello dia teraka tamin'ny andro 26 tamin'ny 1988 tamin'ny volana mey tao Necoclí, Kolombia.
Ny anarana Juan Cuadrado dia midika hoe John Square amin'ny teny Anglisy. Cuadrado dia naterak'i Marcela Bello Guerrero reniny (mpikarakara trano), ary i Guillermo Cuadrado, rainy (mpitondra mpamily fiara).
Natsangana tao Tumaco, Columbia, i Juan. Nihalehibe izy raha mpankafy Manchester United. Ny rain'i Juan Cuadrado, Guillermo, dia novonoin'ny jiolahy mitam-piadiana raha vao efa-taona monja. Araka ny nandidian'ny mamanany, nianjera teo ambany fandriana i Cuadrado mahantra rehefa notifirina ny dadan'ny mpamily fiara. Izany dia midika fa ny maman'i Marcela dia tsy maintsy niezaka mafy nanandrana sy nanangana azy irery. Ny mpamono an'i Guillermo dia tsy nentina hotsaraina.
Juan Cuadrado Childhood Story Plus Untold -The Struggle
Taorian 'ny fahafatesan-drainy dia tonga ny famonoana sivily izay nampifandraisina tamin' ny ady an-trano naharitra am-polo taonany. Nisaraka i Juan sy ny reniny tatỳ aoriana fony izy nahazo asa nitantana ny fivarotana gilasy. Nandao ny zanany niaraka tamin'ny mpampianatra baolina kitra nataony sy ny reniny izy ary nandefa sakafo izay novidiny tamin'ny karamany.
Nividy akondro nandritra ny asa i Marcela tamin'ny fikarakarana sakafo teo amin'ny latabatra ary namonjy vola ho an'ny zanany hoaviny. Taorian'ny fianarany ihany koa dia nanampy ny akanjo maman-tsimony i Juan mba hahatonga azy ireo hivory. Tsara be i Juan Juan tamin'ny fametrahana ny peta-drindrina manokana teo amin'ireo akondro raha mbola nanandrana nanangom-bola ampy hametrahana sakafo eo amin'ny latabatra i Marcela. Ny asany dia ny nanasa sy nanangona ny voankazo.
Juan Cuadrado Childhood Story Plus Untold -Rising to Fame
Angamba ny fahafatesan'ny dadany dia nahatonga azy hitombo haingana kokoa. Ny filoham-pitiavan'i Juan dia nilaza fa baolina kitra avy amin'ny zava-misy henjana amin'ny fiainana ho azy ny baolina kitra tamin'ny fiandohan'ireo 1990 raha nahitana herisetra teo amin'ireo olo-malaza Kolombiana malaza. Ambonin'izany, ny voalohan-dRamatoa iray dia nilaza tao anaty fanadihadiana fa tokony ho mpianatra tonga lafatra i Juan mba hahafahany milalao baolina kitra izay hitany fa safidy hialana amin'ny fahantrana.
Nisy fahagagana iray nitranga tamin'i Juan 13. Nifindra tany 300 kilaometatra izy avy eo an-trano rehefa avy nilalao ho mpilalao baolina kitra ho an'ny Athletico Uraba. Cuadrado dia nanomboka ny asany tamin'ny klioba tao Atlético Uraba, izay toerana niaviany ho azy. Na izany aza, araka ny tolo-kevitry ny mpanangana ny klioba Nelson Gallego, Cuadrado dia nandray anjara amin'ny anjara-toeran'ny mpilalao miditra, matetika amin'ny maha-mpihazakazaka azy.
Nitombo be ny fahatokisan'i Cuadrado ka nahatonga azy hijoro mihoatra noho ny laharana baolina kitra rehetra an'ny tanora. Nentiny tany amin'ny klioban'ny tarika faharoa tao Kiongion Rionegro izy, ary nampiseho bebe kokoa ny mety hisian'ny mpilalao sarimihetsika manerantany. Izy no nanasonia ny Medellin tamin'ny farany tamin'ny 2008 izay nanome azy ny firongatry ny baolina kitra Eoropeana. Tamin'ny Jolay 2014, niaina niaraka tamin'ny fianakaviany tany Florence i Cuadrado. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Juan Cuadrado Childhood Story Plus Untold -Relationship Life
Hitady an'i Melissa Botero tsara tarehy, ilay sipany taloha ary ankehitriny, vadin'ny Kolombiana baolina kitra Juan Bill Cuadrado. Juan dia nihaona tamin'ny fitiavana ny fiainany nandritra ny andro nahafinaritra tany Florentina.
Melissa Botero sy Juan dia nanomboka niaraka tamin'i 2014. Melissa dia akaiky ny fianakavian'i Juan. The hot Latina Manana ny fankatoavan'ny renin'i Juan sy ny namany akaiky.
Talohan'ny nahitan'i Juan ny fitiavany ny fiainany, dia niaina niaraka tamin'ny mamanany izy.
Juan Cuadrado Childhood Story Plus Untold -Ny tena marina
Juan Cuadrado dia manana ny toetrany amin'ny toetrany.
Ny tanjon'i Juan Cuadrado: Tsara fanahy sy be fitiavana ary mahaliana izy. Manana fahafahana hianatra haingana izy ary hifanakalo hevitra
Ny Fahalemen'i Juan Cuadrado: Mety tsy dia mifanohitra loatra izy ary indraindray, tsy manenina.
Inona no tian'i Juan: Tiany ny Kolotsaina Columbian, boky ary mazava ho azy, mandany fotoana miaraka amin'ny mamanay sy ny vadiny.
Inona no tsy tian'i Juan Cuadrado: Tsy tiany i Ana irery ary voafetra. Tsy tiany koa ny fahazarana miverimberina.
Amin'ny ambangovangany, maneho hevitra sy haingana i Juan. Manana toetra samihafa izy, izay tsy ho azonao antoka mihitsy hoe iza no hitanao. Misiônera izy, mifampiresaka ary vonona ny ho tia fahafinaretana, miaraka amin'ny fironana tampoka ho tonga saina, mandefitra ary tsy mitahiry.
Juan Cuadrado Childhood Story Plus Untold -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Tonga avy any amin'ny fianakaviana iray mahantra ambany indrindra eo amin'ny fianakaviana i Juan talohan'ny baolina kitra. Tsy nanadino velively ny sorona nataon'ilay mamanany izy taorian'ny nahafatesan'ny dadany azy. Ankehitriny, dia tsy azo sarahina ny mpivady ankehitriny. Tahaka ny mamba azy; "Rehefa tanteraka ny nofinofiny dia nahatonga ahy ho ilay mamanay mahafaly indrindra eto amin'izao tontolo izao"
Ankoatra ny mamanany, Juan manana rahavavy kely aseho eto ambany.
Taorian'ny famoahana ilay sary etsy ambony tao amin'ny media sosialy, ny maman'i Juan, dia nanampy i Marcela: "Mahatsiaro ny fotoana tsy nahalalanay anay izahay fony mbola tanora i Juan."
Marcela dia manamboatra ny lentil-tsarin'i Juan sy ny akoho kakpea. Mandany ora maromaro isam-bolana koa izy manao feom-bolo. Toy izao no nametrahan'i Juan azy: "Samy reny sy dadany izy." Nampianarina azy ny soatoavina manan-danja ary ny fanohanana nomeny azy dia fototra.
I Juan sy ny maman-dry zareo dia nanonona tamina tambajotram-pahatsiarovana tamina mofomamy mama-and-son tamin'ny fahitalavitra Kolombiana.
Juan Cuadrado Childhood Story Plus Untold -FIFA Representation
Cuadrado dia manasongadina ny rakitsoratra Latina Amerikana FIFA 16, miaraka amina kintana manerantany Lionel Messi.
FACT CHECK: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Juan Cuadrado momba ny tantaram-pianakaviana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
Kolombiana Fetibe Diary
Tantaran'i Luis Muriel Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Radamel Falcao tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram-piainany
Janoary 4, 2018
Dani Alves tantaran'ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika bebe kokoa